လုံလောကျတဲ့ ဒဏျရာဒဏျခကျြတှေ ရပွီးသှားတဲ့အခါ – Shinyoon
ဥပက်ေခာဆိုတာ သူဘာပဲပဲ လုပျနနေေ ဘာကွီးပဲဖွဈနနေေ လဈြလြူရှုပဈလိုကျတာမြိုးပါ . . .ဥပက်ေခာပွုလိုကျတယျဆိုတာ သူနဲ့ပတျသကျပွီး ဘယျအကွောငျးအရာမှ စိတျမ၀ငျစားတော့တာပေါ့
ဥပက်ေခာပွုတတျဖို့ ဘာတှလေိုလဲဆိုရငျ လုံလောကျတဲ့ ဒဏျရာဒဏျခကျြတှပေဲလိုပါတယျ စတေနာနဲ့ ထိုကျတဲ့သူကို စတေနာတှေ ပေးပွီး စတေနာနဲ့ မတနျတဲ့လူတှကေို ဥပက်ေခာပွုလိုကျပါ ။ မတ်ေတာက အရမျးကို အေးခမျြးတဲ့သဘော ဖွူစငျတဲ့သဘောကို ဆောငျပါတယျ ဒါပမေယျ့ နရောတိုငျးမှာ မတ်ေတာကို ရှတေ့နျးတငျလို့မရမှနျးတော့ အခြိနျတနျရငျ နားလညျသဘောပေါကျလာလိမျ့မယျ ။ကိုယျ့ဘကျက စတေနာတှေ ဘယျလောကျပဲပေးပေး စတေနာနဲ့ မတနျတဲ့သူက မတနျတာပါပဲ တနျဖိုးထားရ​ကောငျးမှနျး နားမလညျဘူး ကြေးဇူးတငျရကောငျးမှနျး မသိတတျဘူး
ပွီးတော့ . . . ကိုယျ့ရဲ့ သညျးခံမှုတှကေို နားလညျပေးသငျ့မှနျး သဘောမပေါကျကွဘူး ခနြငျးဖို့လောကျ စဥျးစားနကွေတာလေ ဥပက်ေခာပွုတတျဖို့ အရမျးကွီးမခကျသလို အရမျးကွီးလဲ မလှယျကူပါဘူး ကိုယျ့ဘကျက တနျဖိုးထားသလောကျ အလေးထားမှုတှေ ပွနျရမလာတဲ့အခါ အရမျးကို နာကငျြရပါတယျ ကိုယျ့ဘကျက စတေနာထားခဲ့သလောကျ ပွနျပွီးစျောကားခံရတဲ့အခါ ကိုယျ့မှာ ဒေါသတှထှေကျရသလို ၀မျးလဲနညျးရတယျ
အခဈြနဲ့ ပတျသကျလာတဲ့အခါမှာလဲ . . .ကိုယျအရမျးတှေ ခဈြပွလိုကျတဲ့အခါ ခြောငျထိုးခံထားရတာတှေ မရှိရငျ မဖွဈဘူးလို့ ၀နျခံလိုကျမိတဲ့အခါ ရှိတယျလို့ မထငျတဲ့အခိုကျအတနျ့တှေ ဒါတှအေားလုံးဟာ နာကငျြစရာတှခေညျြးပါပဲ ကိုယျ့မှာ ထိုကျသငျ့တဲ့ နာကငျြစရာတှရှေိတာမှနျပမေယျ့ တဈနေ့ ပွောငျးလဲလာနိုးနိုးဆိုတဲ့ မြှျောလငျ့ခကျြတှေ ကနျြနသေေးတဲ့အခါ ဥပက်ေခာ ပွုရခကျတယျ
ဒါပမေယျ့ တဈနကေ့ရြငျတော့ အလိုလို တတျမွောကျလာလိမျ့မယျ ဘယျအကွောငျးအရာကိုမှ ရငျဘတျကွီးထဲ ထညျ့ပွီး မခံစားတော့ဘူး သူအဆငျပွသေလို နနေသေလို ကိုယျလဲ အဆငျပွသေလို နလောတတျလိမျ့မယျ သမေလို ဖွဈနတေဲ့အခါတောငျ အရငျလို သဲသဲလှုပျမဖွဈမိတော့ဘူး ဥပက်ေခာပွုလိုကျတယျဆိုတာ မုနျးသှားတာမဟုတျဘူး မခဈြတော့တာလဲမဟုတျဘူး
စိတျထဲကို မရှိတော့တာ ဘာလုပျလုပျ မခံစားဖွဈတော့ဘူး ဘာပဲဖွဈဖွဈ စိတျမပူဖွဈတော့ဘူး မစိုးရိမျဖွဈတော့ဘူး ပွုံးပွတဲ့အခါ ပွုံးပွမယျ မဲ့ပွတဲ့ပွနျပွီးမဲ့ပွလိုကျတယျ ဘာပဲဖွဈနဖွေဈနေ လဈြလြူရှုလိုကျတာမြိုးပေါ့ နရောတကာမှာ မတ်ေတာကို ရှတေ့နျးတငျလို့မရမှနျး တဈနကေ့ရြငျ သိလာမှာပါ ပွီးတော့ လုံလောကျတဲ့ ဒဏျရာဒဏျခကျြတှေ ရပွီးသှားတဲ့အခါ အလိုလို ဥပက်ေခာ ပွုတတျလာပါလိမျ့မယျ ။
ဥပေက္ခာဆိုတာ သူဘာပဲပဲ လုပ်နေနေ ဘာကြီးပဲဖြစ်နေနေ လျစ်လျူရှုပစ်လိုက်တာမျိုးပါ . . .ဥပေက္ခာပြုလိုက်တယ်ဆိုတာ သူနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ်အကြောင်းအရာမှ စိတ်မ၀င်စားတော့တာပေါ့
ဥပေက္ခာပြုတတ်ဖို့ ဘာတွေလိုလဲဆိုရင် လုံလောက်တဲ့ ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေပဲလိုပါတယ် စေတနာနဲ့ ထိုက်တဲ့သူကို စေတနာတွေ ပေးပြီး စေတနာနဲ့ မတန်တဲ့လူတွေကို ဥပေက္ခာပြုလိုက်ပါ ။မေတ္တာက အရမ်းကို အေးချမ်းတဲ့သဘော ဖြူစင်တဲ့သဘောကို ဆောင်ပါတယ် ဒါပေမယ့် နေရာတိုင်းမှာ မေတ္တာကို ရှေ့တန်းတင်လို့မရမှန်းတော့ အချိန်တန်ရင် နားလည်သဘောပေါက်လာလိမ့်မယ် ။ကိုယ့်ဘက်က စေတနာတွေ ဘယ်လောက်ပဲပေးပေး စေတနာနဲ့ မတန်တဲ့သူက မတန်တာပါပဲ တန်ဖိုးထားရ​ကောင်းမှန်း နားမလည်ဘူး ကျေးဇူးတင်ရကောင်းမှန်း မသိတတ်ဘူး
ပြီးတော့ . . . ကိုယ့်ရဲ့ သည်းခံမှုတွေကို နားလည်ပေးသင့်မှန်း သဘောမပေါက်ကြဘူး ချနင်းဖို့လောက် စဉ်းစားနေကြတာလေ ဥပေက္ခာပြုတတ်ဖို့ အရမ်းကြီးမခက်သလို အရမ်းကြီးလဲ မလွယ်ကူပါဘူး ကိုယ့်ဘက်က တန်ဖိုးထားသလောက် အလေးထားမှုတွေ ပြန်ရမလာတဲ့အခါ အရမ်းကို နာကျင်ရပါတယ် ကိုယ့်ဘက်က စေတနာထားခဲ့သလောက် ပြန်ပြီးစော်ကားခံရတဲ့အခါ ကိုယ့်မှာ ဒေါသတွေထွက်ရသလို ၀မ်းလဲနည်းရတယ်
အချစ်နဲ့ ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာလဲ . . .ကိုယ်အရမ်းတွေ ချစ်ပြလိုက်တဲ့အခါ ချောင်ထိုးခံထားရတာတွေ မရှိရင် မဖြစ်ဘူးလို့ ၀န်ခံလိုက်မိတဲ့အခါ ရှိတယ်လို့ မထင်တဲ့အခိုက်အတန့်တွေ ဒါတွေအားလုံးဟာ နာကျင်စရာတွေချည်းပါပဲ ကိုယ့်မှာ ထိုက်သင့်တဲ့ နာကျင်စရာတွေရှိတာမှန်ပေမယ့် တစ်နေ့ ပြောင်းလဲလာနိုးနိုးဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေ ကျန်နေသေးတဲ့အခါ ဥပေက္ခာ ပြုရခက်တယ်
ဒါပေမယ့် တစ်နေ့ကျရင်တော့ အလိုလို တတ်မြောက်လာလိမ့်မယ် ဘယ်အကြောင်းအရာကိုမှ ရင်ဘတ်ကြီးထဲ ထည့်ပြီး မခံစားတော့ဘူး သူအဆင်ပြေသလို နေနေသလို ကိုယ်လဲ အဆင်ပြေသလို နေလာတတ်လိမ့်မယ် သေမလို ဖြစ်နေတဲ့အခါတောင် အရင်လို သဲသဲလှုပ်မဖြစ်မိတော့ဘူး ဥပေက္ခာပြုလိုက်တယ်ဆိုတာ မုန်းသွားတာမဟုတ်ဘူး မချစ်တော့တာလဲမဟုတ်ဘူး
စိတ်ထဲကို မရှိတော့တာ ဘာလုပ်လုပ် မခံစားဖြစ်တော့ဘူး ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စိတ်မပူဖြစ်တော့ဘူး မစိုးရိမ်ဖြစ်တော့ဘူး ပြုံးပြတဲ့အခါ ပြုံးပြမယ် မဲ့ပြတဲ့ပြန်ပြီးမဲ့ပြလိုက်တယ် ဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေ လျစ်လျူရှုလိုက်တာမျိုးပေါ့ နေရာတကာမှာ မေတ္တာကို ရှေ့တန်းတင်လို့မရမှန်း တစ်နေ့ကျရင် သိလာမှာပါ ပြီးတော့ လုံလောက်တဲ့ ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေ ရပြီးသွားတဲ့အခါ အလိုလို ဥပေက္ခာ ပြုတတ်လာပါလိမ့်မယ် ။